Bitcoin banknotes na-atụ anya ga-dị na Singapore site na njedebe nke afọ - Blockchain News
Bitcoin banknotes na-atụ anya ga-dị na Singapore site na njedebe nke afọ
Tngem, a kaadị hardware wallet ụlọ ọrụ amalitela na pilot ire nke ya Bitcoin banknotes na Singapore ahịa.
Tangem Aims ka anụ ahụ azụmahịa iji cryptocurrency ọzọ maara noob eji ọkụ, na-ezube na-emepụta ọtụtụ nde na ndetu site na njedebe nke afọ.
na Singapore, a obodo onye ụkpụrụ bụ nnọọ nkwado nke ma cryptocurrency na blockchain technology, na ndetu ga-maka zuo na Suntec City alaka nke imewe ụlọ ahịa yinye Megafash.
The Notes, nke ga-abịa na iche nke 0.01 na 0.05 BTC ($92 na $463 karị), ndị bụ n'ezie zuru ego-dị ka ngwaike wallets.
Coinbase malite ČR ...
Previous Post:Coinbase na-ezube na-emeghe ọhụrụ ụlọ ọrụ dị na Chicago
Next Post:12 Chinese mmiri eji blockchain na 2017
Ka 18, 2018 na 5:38 AM
Ka 31, 2018 na 3:29 AM
June 2, 2018 na 1:00 PM